शिल्पाले खुशी दिन सकिन भन्दै राज शार्लिनकोमा पुग्ने गरेको खुलासा, राज कुन्द्रा ज’ब’र्ज’स्ती चु’म्बन गरे ! – Khabaarpati
July 29, 2021 adminLeaveaComment on शिल्पाले खुशी दिन सकिन भन्दै राज शार्लिनकोमा पुग्ने गरेको खुलासा, राज कुन्द्रा ज’ब’र्ज’स्ती चु’म्बन गरे !
भारतीय मुलका बेलायती उद्योगपति तथा अभिनेत्री शिल्पा सेट्टीका श्रीमान राज कुन्द्रा अहिले प्रहरी हि’रासतमा छन्। पो’र्न भिडिओ बनाएको आरोपमा उनीमाथि यतिबेला अनुसन्धान भइरहेको छ।
उनको पक्ष र विपक्षमा धेरैले आफ्ना भनाइहरु पनि राखिरहेका छन्। शिल्पा आफैंले आफ्ना पतिमाथि लागेको आरोप ग’लत भएको बताएकी थिइन्। उनले राजले का’मु’क चलचित्र बनाएको र यो चलचित्र पो’र्न नभएको उनको भनाइ छ। तर प्रहरीले भने राजले पो’र्न चलचित्र बनाएको आफूसँग प’र्याप्त प्रमाण भएको बताएको छ।
यसबीचमा अभिनेत्री स’र्लिन चो’प्राले राज कुन्द्रामाथि यौ’न दु’र्व्य’व’हा’र’को आरोप लगाएकी छिन्। सर्लिनका अनुसार राजले उनीमाथि ज’ब’र्ज’स्ती चु’म्बन गरेका थिए। मुम्बई क्रा’इ’म ब्रा’न्चमा बयान दिँदै उनले यस्तो आ’रोप लगाएकी हुन्। उनका अनुसार सन् २०१९ मा कुन्द्राले उनका म्या’नेजरसँग फोन गरेर केही प्रो’जेक्टबारे कुरा गरेका थिए।
सोही वर्षको मार्च २७ मा कामबारे छलफल गरेपछि पूर्व सूचना बिनै कु’न्द्रा स’र्लिनको घर आएका थिए र असहमति बा’बजुद उनले चु’म्बन गरेका थिए। राजले ज’र्ब’ज’स्ती गर्न खोजेपछि आफू बा’थ’रुममा भा’गेको उनको भनाइ छ। स’र्लिनका अनुसार राज कुन्द्रा र शिल्पा सेट्टीबीचको सम्बन्ध पनि राम्रो थिएन।राज कुन्द्रा घरमै हुँदा पनि त’नाबमा हुने गरेको उनको भनाइ छ। गत अप्रिलमा मात्र उनले राज कु’न्द्रामाथि यौ’न दु’र्व्य’व’हा’र गरेको आरोप ल’गाएकी थिइन्। हाल सो विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। जीन्यूज
बिमानस्थलमा सलमान खानलाई आर्मी अफिसरले रोके, बर्दीको तागत भन्दै भयो प्रशंसा (भिडियो सहित)